Azonao atao izao ny mamorona vondrona handeha hihazakazaka amin'ny Runkeeper 7.0 | Androidsis
Misy iray fampiharana isan-karazany lehibe mandeha mihazakazaka izay ahafahantsika mahafantatra ny fivoarana amin'ny fampihetseham-batana ataontsika isan'andro. Anisan'ireo fampiharana rehetra ireo ny sasany izay misongadina amin'ny fomba lehibe ary manome izany mamorona lahatsoratra tahaka ity iray ity, roa volana lasa izay Amporisihiko ianao hanandrana azy ireo, satria samy manana ny tombony sy ny toetrany izy ireo. Ny iray manasongadina lavitra dia ny Runkeeper, fampiharana mihazakazaka izay manana ny zavatra rehetra antenainao avy amin'ny fampiharana an'ity karazana ity ary mampiseho fa misy toerana lehibe ho an'ny fivoarana amin'ny endrika.
Azo antoka fa maro aminareo no mampiasa an'ireto fampiharana ireto rogues miaraka amin'ny namana rehefa mizara ny làlana amin'ny alàlan'ny Facebook ianao, ary eto no ahazoan'ny Runkeeper endrika vaovao izay mamporisika ny hamorona vondrona ho an'ireo mpihazakazaka. Azonao atao ny misafidy ny fanamby tadiavinao hifaninana amin'ireo namanao ary hametraka toy izany ny faharetan'ny fanamby, manasa ireo izay tianao handray anjara ary manome anarana mahafinaritra ho an'ny vondrona. Amin'ny Runkeeper, ny fihazakazahana miaraka amin'ny namana dia tsy hitovy intsony.
Amin'ny famoronana an'ity vondrona ity dia ho hitanao ny fivoaran'ny tsirairay amin'ireo mpihazakazaka sy miresaka amin'ny pejy vondrona hamporisika azy ireo na hikorisa azy ireo kely. Ao anaty vondrona iray dia mora kokoa ny mifaly sy manandrana mandresy ny rakitsoratry ny tena, ankoatry ny hoe hafa ny antony manosika. Runkeeper dia nanana hevitra tsara rehefa nanolotra an'ity zava-baovao ity ho an'ny fampiharana anao.
toy izany mandray fanamby ianao, manasa ny namanao ianao, fantatrao ny fivoaran'ny tsirairay ary hanana ny chat aza ianao handefasanao hafatra nefa tsy mila miala amina rindrambaiko hafa ianao. Ho eo foana ny vondrona eo amin'ny kiheba fanamby, ka araho maso izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Mpihazakazaka 7.0 manampy vondrona hanohitra ny namanao handeha hihazakazaka